Cabdirisaaq Ciise “In ka badan 15 sano ayaan TV-yada kala socdey xuska 26-ka Juun”. – Shabakadda Somalibile Media
Cabdirisaaq Ciise “In ka badan 15 sano ayaan TV-yada kala socdey xuska 26-ka Juun”.
Cabdirisaaq Ciise Aadan oo ka mid ah dadka ay ka muuqato wadaniyada mar walbana ku taama in la helo dowlad xooggan oo dalka dhibka ka saarta ayaa sheegay in rajada dawladnimadu ay tahay mid meel wanaagsan mareysa maanta islamarkaana farxad galineysa shacabka Soomaiyeed ee jecel qaranimada.
Mudane Cabdirisaaq ayaa yiri.
“In kabadan 15 sano oo aan dibada ku noolaa waxaan mar walba kala socon jirey xuska maalmaha xoriyada TV-yada..waxaana farxad gaar ah ii leh in sanadihii ugu danbeeyey oo ay caawa ka mid tahay aan kala socdo TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo naga xaqab tiray qudbadihii damaashaadkii munaasabada qiimaha leh ee ka socota Aqalka dowlada hoose ee Muqdisho”.
Cabdirisaaq Ciise Aadan ayaa tilmaamey in sanadkan ay si gaar ah u soo jiiteen sida la isaga xilsaarey goobihii taariikhiga ahaa ee halgamayaashii xoriyada Soomaaliya oo lagu dhisey barnaamijka is xilqaan, kaas oo uu sheegay in ay cadeyn u tahay in lawada leeyahay.
Cabdirisaaq Ciise ayaa xusey in taalooyinkii Daljirka Dahsoon, Dhagax-tuur, Xaawo Taako , Sayid Maxamed Cabdille Xasan iyo Axmed Gurey si qurixbadan loo dhisey iyada oo shacabku u mideysnaayeen, taas oo uu ku tilmaamey horumar dadku ku talaabsadeen.
Cabdirisaaq Ciise waxa uu yiri
“Caawa waxaan dareemayaa in ay isu soo dhawaanayaan labadii gobal ee Waqooyi iyo Koonfur maadama ay caawa si isku mid ah u xusayaan 26-Juun labadoodaba”.
Cabdirisaaq Ciise Aadan ayaa Ummadda Soomaaliyeed u rajeeyey guul iyo midnimo isaga oo ugu baaqey in ay xaliyaan khilaafaadka dhexdooda ah, gacmahana is qabsadaan si uusan cadowgu uga faa’iideysan.
Hambalyo 26-ka Juun..Hambalyo.
Maxamed Faarax Duurgal